INtaba yeCarpe Diem - I-Airbnb
INtaba yeCarpe Diem
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguC&D
I-Monte Carpe Diem yipropathi ene-2.5 yeehektare (iihektare ezi-6) ebekwe e-Baixo Alentejo kunye nomgama we-1km (0.6 yeemayile) ukusuka eGarvão kunye ne-13km (iikhilomitha ezisi-8) ukusuka e-Ourique. Njengoko igama lisitsho, sibamba imini ngokonwabela ukuzola kwamaphandle, inkangeleko yomhlaba, ukutshona kwelanga okumangalisayo kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi ezimangalisayo.
Entshona unokonwabela unxweme lwaseAlentejo, kwaye emazantsi eAlgarve apho sifumana olona lwandle luhle kakhulu.
I-Monte Carpe Diem inendlu ephangaleleyo kunye nenhle enamagumbi okulala ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-3, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye neveranda enebarbecue. Indawo yangaphandle inendawo esemthethweni enedama labucala le-14x7 yeemitha apho unokupholisa khona kwaye wonwabe. Kukwakho nedama elincinci, igadi yeziqhamo, imithi yomnquma kunye nezisele zeenyosi (ezigcinwe ngokufanelekileyo kude nendlu). Apha, unokonwabela inkululeko epheleleyo kunye nobumfihlo.
Ibhayoloji eyohlukeneyo kwindawo eyingqongileyo igqwesile, unokuthatha uhambo kwaye ujonge iintaka kunye nezilwanyana zalo mmandla. Idami laseMonte da Rocha likumgama oziikhilomitha ezi-3 (iikhilomitha ezi-1.8) apho unokuyonwabela ipiknikhi okanye ulobe.
Le ndawo ikwi-1km ukusuka kwilali yase-Garvão eyilali eqhelekileyo yase-Alentejo, enabantu abanobubele apho unokufumana khona iikhefi kunye neendawo zokutyela kunye nemarike encinci.
Ilali yase-Ourique ikumgama oziikhilomitha ezili-13. Inkulu kakhulu kunelali yaseGarvão, e-Ourique unokufumana ivenkile enkulu kunye neevenkile ezininzi kunye neeresityu.
Isikhululo sikaloliwe saseFuncheira sikumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela (iikhilomitha ezi-1.2) ukusuka kwilali yaseGarvão kwaye oololiwe abavela eLisbon naseAlgarve bafika apho yonke imihla. ILisbon kunye neFaro (Algarve) zizixeko ezinezikhululo zeenqwelomoya zamazwe ngamazwe.
Iilwandle ezikufutshane zimalunga neyure enye kwaye zikunxweme lwaseAlentejo (Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira, Odeceixe, ...) kunye naseAlgarve (unxweme olusemazantsi ePortugal). Izithuthi ziyafuneka ukuze wazi iilwandle ngenxa yomgama.
Umbuki zindwendwe ngu- C&D